रातमा टिपर सञ्चालन झन् जोखिमपुर्ण !
काठमाडौं, ८ साउन । रातको समयमा टिपर सञ्चालन गर्न दिनु अझ जोखिमपुर्ण रहने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । रातिको समयमा तीव्र गतिले टिपर चल्ने भएकाले भयानक दुर्घटना हुनसक्नेतर्फ उनीहरुलाई सेचत पारेका नागरिकमा खबर ...
काठमाडौं, ८ साउन। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले छोराको बिहेको इन्गेजमेन्टमा मात्रै २० लाख र पूरा बिहेमा ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै उक्त रकमको स्रोतको खोजी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा रहनुभएका ...
दूधको मूल्य समायोजनको माग गर्दै दुग्ध किसानले आज दूध बाँडेर प्रदर्शन गरेका छन् । दूधको अतिरिक्त मूल्य घटाएको विरोधमा यसअघि सडकमा दूध पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका किसानले आज रत्ननगरस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ...
नारायणगढबाट वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको ना५ख ३७०१ नंको बस हेटौँडा–नारायणगढ सडक खण्डको लेबटमा आज मध्याह्न अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिँदा २० जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ११को चुरेहिल अस्पताल र पाँचजनाको हेटौँडा ...
अनुसन्धान रोकियो तस्करी रोकिएन !
काठमाडौँ, ७ साउन । सुन तस्करीसम्बन्धी सरकारी अनुसन्धान समितिको म्याद सकिएपछि अनुसन्धान रोकिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसमचिव ईश्वरराज पौडेललको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान समितिको म्याद असार मसन्त सकिएको छ । चार ...
काठमाडौँ, ७ साउन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दैनिक १२ देखि १५ जोडी सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मात्रै पाँच वर्षको अवधिमा १२ हजार २३९ जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका छन्। अदालतमा ...
काठमाडौं, ६ साउन । मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रुपमा शुल्क उठाएको आरोप खेपेको मलेसिया भीएलएन प्रालिलाई वैदेहिक रुोजगार विभागकै तत्कालिन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले संरक्षण गरिएको भेटिएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक पुष्करले ...
भारतमा नेपाली गाडीलाई सहज प्रवेश
काठमाडौं, ६ साउन । भारतमा अब नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीले निर्बाध प्रवेश पाउने भएका छन् । नेपालको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भारतको सडक परिबहन तथा राजमार्ग मनत्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नयाँ ...
सुर्खेतमा १३१ महिला बालबालिका बेपत्ता
गत आर्थिक वर्ष यहाँ हराएकामध्ये अहिलेसम्म १३१ जना महिला तथा बालबालिका फेला नपरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा आव २०७४-७५ महिला तथा ...
काठमाडौं, ५ साउन । स्वैच्छिक अवकाशलाई तुहाउन सरकारले स्वैच्छिक अवकाशबाट बाहिरिएकालाई नियमित प्रक्रियाबाट पेन्सन दिने नीति ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध कर्मचारीले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वैच्छिक अवकासमा दिएको ...
नेपालले यसरी नाप्दै छ सगरमाथाको उचाइ
काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दै छ । शेर्पा आरोहीमार्फत जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) उपकरण सगरमाथाको शिखरमै पुर्‍याएर उचाइ मापन गर्ने भएको हो । मौसमको अनुकूलताका आधारमा ०७६ वैशाखदेखि ...
कानुन कार्यान्वयनमा अझै अलमल
काठमाडौं, ५ साउन । लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ। आवश्यक नियमावली तथा दिग्दर्शन बनिनसकेका र कार्यान्वयन गर्ने निकायले ...
केन्याबाट उद्धार गरिए २१ नेपाली कन्या
काठमाडौं, ५ साउन । मानव तस्करले अफ्रिकी मुलुक केन्या पुर्‍याएका २१ नेपाली युवतीलाई स्थानीय प्रहरीले बिहीबार राति क्लबबाट उद्धार गरेको छ । उनीहरुलाई वेस्टल्यान्ड क्षेत्रका दुई रात्रिकालीन क्लबबाट उद्वार गरेको हो ...
काठमाडौ, ४ साउन । पदयात्री यर्पटकलाई बिरामी बनाएर फेक रेस्क्यु गर्दै प्रतिपर्यटक ५० हजार डलरसम्म बिमा कम्पनी हुँदै पुनर्बिमा कम्पनीबाट असुल गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । लामो समयदेखि ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड, ...
केमान टापुमा यसरी नेपालीबाटै ठगिन्छन्
काठमाडौं, ४ साउन । भोजपुरका राजु कार्कीले क्यारिबियन समुद्रमा पर्ने केमान टापुमा साइकल चलाउन थालेको १४ महिना बित्यो । त्यो साइकलमा केमानका गल्लीभित्र छिर्न बाँकी सायदै होला । उनको साइकलको आफ्नै ...